२०७५ साल जेठ ३ गते नेपालको इतिहासमा दुई ठूला वामपन्थी पार्टीहरू एक भए । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले एक भएर नेकपा बनेदेखि नै नेताहरूको व्यवस्थापनलाई लिएर पार्टीभित्र खटपट शुरू भएको हो ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नयाँ पार्टीका अध्यक्षले नेकपा जेट भएको र जेट उडाउन दुई पाइलट चाहिने भन्दै द्वीअध्यक्षात्मक प्रणालीको बचाउ गरेका थिए । उनले निर्माण गरेको 'जेट'को भाष्य अहिलेसम्म जनजिब्रोमा झुन्डिएको छ ।
उनले नेकपालाई जेट बताउनु रणनीतिक भाष्य निर्माण गर्नु थियो । उनले जेटमा दुई पाइलट हुने भनेर तत्कालका लागि नेकपाका दुवै अध्यक्षहरू समान भएको सन्देश दिन खोजेका थिए । पछि उनले आफ्नै व्यवहारबाट अध्यक्ष प्रचण्ड जेटको 'को-पाइलट' मात्र रहेको देखाउन भरमग्दुर प्रयास गरे ।
पछिल्लो समयमा त ओलीले जेटलाई कमर्सियलबाट प्राइभेट बनाउन खोजे । सबै प्राइभेट जेटहरूमा दुईवटा पाइलट आवश्यक पर्दैन । कमर्सियल जेटमा भने २ वटा पाइलट अनिवार्य हुनैपर्छ ।
राजीनामा माग्ने हो भने पार्टी विभाजन गरिदिने ओलीको धम्कीलाई प्रचण्डपक्षीय एक नेताले 'हलो काटी मुंग्रो' भन्ने उखान चरितार्थ गर्न खोजेको रूपमा बुझे । केहीदिन अघि लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, 'जेट होइन, अब नाइटबसको ड्राइभर हुने आकांक्षा उहाँमा पलाएको छ । हलो काटेर मुंग्रो बनाउने तरिका उहाँबाट कसैले सिकोस् ।'
तर त्यसपछि केही दिनयता देशभर भारी वर्षा भयो । बाग्मती मात्र होइन, देशभरिका खोलानालामा धेरै पानी बग्यो र सतह अझ बढ्ने क्रम जारी छ । यतिबेला ककपिटमा झगडा गरिरहेका दुई पाइलटहरू नाटकीय ढंगबाट एउटै भाषा बोल्न थालेका छन् ।
राजीनामा माग्ने र नदिने दुवै समूहका कलुषित दुश्मनी बाग्मतीको धमिलो पानीले बगाएको छ । दुवै समूह यतिबेला 'वीरताका साथ पछि हटेको' नेकपा वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।
शुक्रवार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद रहेको स्वीकार्दै भनेका थिए, 'जुनसुकै राजनीतिक दलभित्र हुने बहस र विवाद आन्तरिक हुन् । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व सम्बन्धित राजनीतिक दल र नेताहरूकै हो । पार्टीभित्र हुने यस्ता छलफल, बहस र विमतिहरू तिनका नितान्त आन्तरिक र कतिपय अवस्थामा नियमित प्रक्रिया पनि हुन । यस्ता विषयहरू सम्बन्धित दल र तिनका नेताहरूले आपसी छलफलबाटै सुल्झाउने छन् । यसका लागि धैर्यता र संयम आवश्यक हुन्छ ।'
'धैर्यता' र 'संयम' तिनै शब्द हुन् जसलाई त्यसको भोलिपल्टै आफ्नो गृहजिल्ला चितवन पुगेको प्रचण्डले निकै अर्थपूर्ण ढंगले व्याख्या गरे । ‘मैले हतार गर्न खोजेको भए अर्को दुर्घटना वा के हुन्थ्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ,' प्रचण्डले चितवनबाट आफू धैर्य र संयम रहेको सन्देश दिँदै भने, 'कुनै न कुनै समझदारी, सहमतिबाट हल निस्कन्छ । पछिल्लोपटक अर्का अध्यक्षसँग भएका कुराहरूको संकेत पनि हल गर्नुपर्छ भन्नेतिर नै छ ।’
नेकपाभित्र यसअघि उठेका सबै विवादहरू 'गिभ एण्ड टेक'मा टुंगिएका छन् । पछिल्लो विवाद पनि कुनै न कुनै गिभ एण्ड टेकमा टुंगिएको अनुमान राजनीतिक वृत्तमा लगाइने गरिएको छ । तर अध्यक्षद्वयमध्ये कसले के छाड्यो या पायो त्यो अहिलेसम्म बाहिरिएको छैन ।
केही दिनअघि लोकान्तरले विश्वस्त स्रोतले दिएको सूचनाका आधारमा नेकपाभित्र सहमतिका ५ बुँदे ड्राफ्ट छलफलमा शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा मंसिर ४ गतेको अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनको थप व्याख्या गरेर अघि बढ्ने आशयका बुँदाहरू उल्लेख थिए । स्रोतको पछिल्लो दाबीअनुसार अध्यक्षद्वयबीच तिनै बुँदाहरूमा गहन छलफल भएको छ । यद्यपि सहमतिको ठोस खाका सार्वजनिक भने भइसकेको छैन ।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच केही न केही लिखित सहमति भएकै कारण दुवै एक-एक कदम पछि हटेको हुन सक्ने अनुमानहरू राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ ।
यसबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरू अलि हच्केका जस्ता देखिन्छन् । तर नेता नेपालको अनविज्ञतामा कुनै पनि सहमति हुन नसक्ने उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै नेता नेपालनिकट एक नेताले भने, 'अब पार्टी विभाजनतर्फ जाँदैन, तर अहिलेसम्म कुनै लिखित सहमति भने भइसकेको छैन । जेठ २ गतेको सहमतिलाई मंसिर ४ गतेको सहमतिले विस्थापित गरिदियो भने मंसिर ४ गतेको सहमतिलाई विस्थापित गरेर त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनका आधारमा नयाँ सहमति हुन सक्ने विषयलाई नकार्न सकिँदैन ।'
नयाँ सहमति मंसिर ४ कै सहमतिको थप व्याख्या हो भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ छ, 'ठ्याक्कै त्यसैको थप व्याख्या त नभनौं तर हामीले पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएका कतिपय विषयहरू सम्बोधन गरेर सहमति गरिन्छ । मंसिर ४ मात्र किन ? यसअघिका अन्य सबै सहमतिहरूको व्याख्या हुन सक्छ ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई पटक–पटक पूर्वएमाले समूह मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउने गरेका छन् । तर नेता नेपाल भने यसपटक कुनै पनि उधारो सहमति नगर्ने भन्दै ओलीका प्रस्तावहरूप्रति विमति जनाउँदै आइरहेका छन् । नेता नेपालले गत वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकमै अध्यक्षद्वयको 'चोचोमोचो' अब नचल्ने भनेर दुवै अध्यक्षलाई सचेत गराइसकेका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल नेकपा विभाजनको खतराबाट उम्केको र आफूलाई खुशी लागेको बताउँछन् । लोकान्तरसँग मण्डलले भने, 'पार्टी फुट्यो भने पार्टीको मात्र होइन देशकै भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न उठ्ने थियो । नेताहरूले त्यसलाई केन्द्रमा राखेर बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय गर्नुभएको छ । दुवै अध्यक्षहरू पछि हट्नुभएको छ, खुशी लाग्या छ ।'
उनले पार्टी फुटेको अवस्थामा मान्छे मात्रले होइन, मान्छेले तालिम दिएका पशुपंक्षी जस्तै सुगा, बाँदर भालुहरूले पनि नेताहरूको विश्वास गर्न नसक्ने परिस्थिति पैदा हुने दुखेसो व्यक्त गरे । मण्डलले आफूहरूले विगतमा गरेका सहमतिहरूमाथि नै टेकेर अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाएको समेत बताए ।
'हामीले मंसिर ४ लगायतका अन्य सहमतिलाई थप व्याख्या गरेर अघि बढ्ने भनेर सुझाउँदै आएका हौं । अहिलेसम्म जे सहमति भएको छ, त्यसैमाथि टेकेर नयाँ सहमति गर्नुपर्‍यो । महाधिवेशनसम्म त अहिले दुईवटा अध्यक्षकै सहमतिमा जाने कुरा थियो नि !
कतिपय साथीहरूलाई मनमा दु:ख छ पीडा छ । बाहिर आयो । नेताहरूलाई पनि त्यसले शिक्षा दियो । कमजोरी भएकै हुन् र अहिले दुवै पक्षले त्यो कमजोरी स्वीकारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन,' मण्डलले भने ।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा दुवै अध्यक्षले सहमतिको भाषा बोलेकोमा आफूहरूलाई खुशी लागेको बताए । 'पार्टी एक गर्ने पनि अध्यक्षहरू नै हुनुहुन्छ र विभाजनबाट रोक्ने काम पनि उहाँहरूकै हो,' उनले भने, 'केही समस्या देखिएका हुन् तर अहिले समाधानउन्मुख छ । खुशी लागेको छ ।'
यससँगै भयंकर टर्ब्युलेन्समा फसेको नेकपा जेटमाथि विभाजनको चट्याङ हटेको छ । यद्यपि जेट सहजरूपमा अवतरण हुन भने बाँकी नै छ ।
'सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल' नाम दिइएको उडान अझै गन्तव्यमा पुगिसकेको छैन । बीचमै तेल सकिने खतरा उस्तै छ । पाइलटहरूबीच तत्कालका लागि युद्धविराम भएपनि त्यसले ८ लाख कार्यकर्ता र ३ करोड जनताको भविष्यलाई कता डोहोर्‍याउने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।